Natiijadii Cayaartii Galabta dhex martay Xulalka Kubadda Cagta Soomaaliya iyo Rwanda
Xulka Kubadda Cagta waddanka Rwanda ayaa 3-0 uga badiyay Xulka Kubadda Cagta Soomaaliya kadib markii Galabta Cayaar ka tirsan koobkaa ama tartanka Qaaradaha Bariga iyo Bartamaha Afrika ku kulmeen labada Xul.
Bilawgii Cayaarta ayaa Xulka Soomaaliya oo u muuqday kuwa Jawga waddanka Itoobiya la qabsan waayay laga dhaliyay Kubad Laad xor ah, iyadoo qeybtii hore lagu kala nastay Soomaaliya 0-iyo Rwanda oo leh hal Gool.
Qeybtii Labaad ayaa Xulka Soomaaliya waxay heleen fursado qaali ah, balse Cayaarta oo ka harsan dhamaadkeeda 20 daqiiqo ayaa soomaaliya laga dhaliyay 2 Gool, guud ahaan Cayaarta ayaa ku soo dhamaatay Rwanda oo leh 3-Gool iyo Soomaaliya oo leh-0.
Kooxda Soomaaliya oo ku Guruub tahay wadamada Suudan Uganda iyo Rwanda ayaa weli waxay rajo ka leedahay inay u soo baxdo wareega labaad ee tartanka ka socda Magaalada Adis ababa dalka Itoobiya.
Kulanka soo socda ayaa khamiista waxay la cayaari doontaa Xulka Suudaan, dhinaca kale Xulka Itoobiya ayaa isna tartanka ku bilaway guuldaro kadib markii looga badiyay 2-1 oo guusha ku raacday Xulka Tanzania.
Sidoo kale Xulka Jabuuti ayaa looga badiyay 3-0 oo guusha ku raacday Xulka Malawi oo dad badan aaminsan yihiin inay koobkan qaadi doonaan.